Ngaba inombolo yam yokhuseleko lwentlalo kunye nendlela yokufumana ikopi | Ezezimali
Inombolo yokhuseleko lwentlalo Elinye lamaxwebhu abaluleke kakhulu ekufuneka sonke sibe nawo, kuba ihlala ifuneka xa kusenziwa uthotho lweenkqubo. Ukuba ufuna ukwazi eyakho inombolo yokhuseleko lwentlalo, Emva koko siza kukuxelela ukuba ungayifumana njani ukuze ukwazi ukwenza naluphi na uhlobo lwenkqubo.
1 Ithini iNombolo yoKhuseleko lweNtlalo?
2 Ngubani onokufumana inombolo yokhuseleko lwentlalo?
3 Ndazi njani ukuba yintoni inombolo yam yokhuseleko loluntu?
4 Iphi inombolo yokhuseleko lwentlalo?
5 Yintoni endiyifunayo ukuze ndisebenzise inombolo yam yokhuseleko lwentlalo?
6 Uhlengahlengiso kwinombolo yokhuseleko lwentlalo
7 Khuphela uxwebhu lokuzibandakanya kukhuseleko lwentlalo
Ithini iNombolo yoKhuseleko lweNtlalo?
El Inombolo yokhuseleko lasekuhlaleni, Ikwabizwa ngokuba yinombolo yokudibana kwezokhuseleko, linani elahlukileyo elinamanani ali-9 kwaye inyanzelekile kubo bonke abemi baseSpain abacinga ngokusebenza. Ngokunjalo, bonke abo bantu baxhamla ipenshoni okanye, apho kufanelekileyo, isibonelelo, banembopheleleko yokufumana le nombolo yokhuseleko lwentlalo.
Ukuthe ngqo, Ngaphandle kwenombolo yokhuseleko kwezentlalo, umntu akanakho ukwenza naluphi na uhlobo lomsebenzi ohlawulelweyo Kwaye ukuba uyayenza, uya kuba uyenza ngokungekho mthethweni. Ukungabinayo le nombolo kuthetha ukuba lo mmi akahambelani nenkqubo yokhuseleko lwentlalo kwaye ngenxa yoko akanakho ukufikelela kuzo zonke izibonelelo ezibonelelwa yile nkqubo.
Eli nani liyimfuneko ebantwini xa befuna umsebenzi, xa befumana omnye okanye ngokulula xa befuna ukubhalisa kwiNkonzo yeNgqesho.
Ngubani onokufumana inombolo yokhuseleko lwentlalo?
Bonke abemi abahlala eSpain ngokusemthethweni banokufumana inombolo yokudibana kwezokhuseleko. Kwiinkampani, abasebenzi banokulufumana olu xwebhu njengoko kufanelekile ukuba benze nawuphi na umsebenzi. Kwakhona, eli nani linokufunyanwa kwifayile ye- Amacandelo Ephondo kaNondyebo Jikelele Wokhuseleko Loluntu okanye ngolawulo.
Kufanelekile ukuba uchaze ukuba le nombolo yokhuseleko loluntu ayifumaneki kuphela xa uqala ukusebenza. Abantu abangazange bakhuphe igalelo okanye abancinci, banokuba nayo inombolo yokubandakanyeka kukhuseleko loluntu. Okwangoku apho umntu athe waqala nawuphi na umsebenzi, elo nani liya kuba linani lokudibana elichaza ukubandakanywa kwabo kwinkqubo yokhuseleko lwentlalo.
Kubalulekile ukuba uthi awunakuba neenombolo zokhuselo loluntu ezininzi, nangona kuyinyani ukuba kukho iimeko apho abantu banenye inombolo yokhuseleko kwezentlalo ngenxa yempazamo yolawulo. Xa kusenzeka into enje, Okwenziwa nguKhuseleko lweNtlalo kukudibanisa onke amanani kwaye umisele enye kuphela njengeyona iphambili, ihlala iyeyona inokusetyenziswa kutshanje kwinkqubo.
Kuya kufuneka kwakhona icaciswe ukuba inani eliboniswe kwikhadi lezempilo ayilo nani lokhuselo loluntu. Kwenzeka ntoni ukuba inani elivela ekhadini lenziwe ngokusekwe kwinombolo yokhuseleko lwentlalo. Kungenxa yoko le nto amanani ngokubanzi ehambelana, nangona kunjalo ekhadini abonisiwe amanani amabini ongezelelweyo ahambelana nekhowudi yephondo apho inkqubo inxulumene khona, kunye nenombolo elandelelanayo.
Ukuba unobumba B ubonakalisiwe kwikhadi lezempilo, ngasemva kolu luhlu, oko kuthetha ukuba umntu ufumana unyango njengabaxhamli, kubandakanya iqabane elingena ngeniso okanye abantwana abangasebenziyo, kumntu onelungelo lokufumana zabo ezifanayo. Nabani na angabhalisa ukufumana inombolo yokhuseleko kwezentlalo, kwaye kunokwenzeka ukuba uzikhuphe.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, eyakhe Inkqubo yokhuseleko kwezentlalo inakho ukurhoxisa inani elithethiweyo kwimeko apho kuye kwagqitywa ukuba yanikwa ngaphandle kokufumana ilungelo layo.
Ndazi njani ukuba yintoni inombolo yam yokhuseleko loluntu?
Ukwazi ukuba yeyiphi inombolo yokhuseleko lwentlalo, kufuneka ubesengqeshweni, okanye, ukuba kufanelekile, ubusebenza ngaphambili. Kule nto uya kuba neendlela ezininzi zokujonga inombolo yakho yokukhuselwa kwezentlalo ngekhadi lakho lezempilo, umvuzo webhanki, phakathi kwabanye.
Enye yeendlela ezilula zokwazi inombolo yakho yokhuseleko lwentlalo kukutsalela umnxeba kule nombolo: 901502050 XNUMX XNUMX. Kule nombolo, umntu ozimeleyo uya kukunika ishedyuli ukuze uye ngqo kwiofisi yokhuseleko loluntu kwaye fumana inombolo yakho.
Ngoku, ukuba uyasebenza ngoku, kwimivuzo yakho unokufumana nenombolo yokhuseleko kwezentlalo. Ngokwesiqhelo uyifumana iphezulu kwirhafu kwaye akunamsebenzi ukuba ngaba ngumvuzo omdala, kuba inombolo yokhuseleko lwentlalo ayitshintshi, ihlala ifana.
Ukongeza, ungayazi inombolo yakho yokhuseleko lwentlalo, ungayifumana kwimigqaliselo yezonyango, kuba olu lwazi lukwavela apho. Izivumelwano zengqesho ezisayiniweyo kunye nenkampani, eli nani liyaboniswa.
Unokufumana ukuba yeyiphi inombolo yokunxibelelana nokhuseleko ekuhlaleni kwiziko lezonyango kwaye ulicele ngokulula, kodwa ngenxa yoku kufuneka uveze isazisi sakho.
Ungaya nakuNondyebo woKhuseleko lweNtlalo ukuze ufumane olu lwazi, kunye nokuphinda kabini ikhadi lezempilo.
Ukongeza, i Unokufumana kwakhona inombolo yakho yokhuseleko ngokungena kwiwebhusayithi kunye nokusebenzisa inkonzo "yeXwebhu loBulungu", leyo yenziwa ngendlela ngomyalezo obhaliweyo weSMS. Kwimeko apho umntu onomdla wayekhe wanika uNondyebo Jikelele woKhuseleko lweNtlalo inombolo yefowuni ephathekayo.
Nje ukuba isicelo sekhowudi senziwe, umntu lowo ufumana umyalezo obhaliweyo weSMS, oya kuthi abavumele ukuba bafumane inombolo yokhuseleko lwentlalo, bayiprinte okanye bayibuze nje.
Iphi inombolo yokhuseleko lwentlalo?
Ngoku ngoku sikubonisile ukuba ungayifumana njani inombolo yakho yokhuseleko lwentlalo, lixesha lokuba uthethe malunga nokuba ungayifumana phi inombolo yokhuseleko lwentlalo. Okokuqala, kubalulekile ukuba wazi ukuba awukaze usebenze ngaphambili kwaye ufuna ukuqala ukusebenza, olu xwebhu luya kucelwa kuwo nawuphi na umsebenzi.
Into eqhelekileyo kukuba kufuneka ugcwalise isicelo oya kuthi kamva usibonise kwi Ulawulo lukaNondyebo Jikelele woKhuseleko lweNtlalo. Kwesi sicelo kufuneka uchaze idilesi yenkampani oceba ukusebenzela kuyo. Ungalibali ukuba zonke izicelo zokudibana kwezokhuseleko kufuneka zenziwe ngaphambi kokuqala komsebenzi.
Yintoni endiyifunayo ukuze ndisebenzise inombolo yam yokhuseleko lwentlalo?
Zonke izicelo zobhaliso kwinkqubo yokhuseleko lwentlalo kufuneka ziqulathe ulwazi olunxulumene nomsebenzi oza kuwenza. Ngale ndlela, ucelwa le ngcaciso ilandelayo:
Igama okanye igama lenkampani elikhuthaza ubhaliso
Ikhowudi yeAkhawunti yeGalelo
Kuya kufuneka uchaze iSikimu soKhuseleko lweNtlalo
Amagama akho apheleleyo kunye neefani zakho
Umhla wokuqalisa komsebenzi
Uhlengahlengiso kwinombolo yokhuseleko lwentlalo
Ngamanye amaxesha kuye kufuneke wenze utshintsho kwinombolo yokhuseleko lwentlalo, kwimeko apho kuya kufuneka uye kuLawulo lukaNondyebo Jikelele woKhuseleko lweNtlalo oluhambelana. Kunye nokunikezelwa kwe-DNI, onke amaxwebhu angqina isidingo sokutshintsha inombolo yokhuseleko lwentlalo kufuneka aziswe.
Kwimeko apho unokuthandabuza malunga ne ikhadi lezokhuseleko loluntu, emva koko kuyafuneka ukuba uye kwiziko lokhathalelo lokuqala okanye kwikliniki yezigulana ezingalaliswayo ekuLuntu oluZimeleyo oluhambelanayo.
Khuphela uxwebhu lokuzibandakanya kukhuseleko lwentlalo
Le yinkonzo enikezelwa yi-portal esemthethweni yoLawulo lukaNondyebo woKhuseleko lwezeNtlalo Jikelele kwaye evumela amaqela anomdla, kungekuphela nje ukuba afumane, kodwa nokuba aprinte okanye, apho kufanelekileyo, adibane kwi-intanethi, ikopi yethutyana yenombolo yokhuseleko lwentlalo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le nkonzo ijolise kuphela kwabo bantu sele benenombolo yokunxibelelana kwezentlalo eyabelweyo. Inkonzo ikuvumela ukuba ujonge kwangoko kwaye uqhagamshelane nekopi yokubambisa yenombolo yokunxibelelana kwezentlalo, ekwabizwa ngokuba luxwebhu lokudibana.
Nokuba kungasetyenziselwa ntoni, inkonzo ivumela amaqela anomdla ukuba alande uxwebhu kwifomathi yefayile yePDF okanye, apho kufanelekileyo, aluprinte ngqo kwi-Intanethi.
Olu xwebhu lunolu lwazi lulandelayo lomntu olucelayo:
Idatha ekuchongeni i-DNI okanye i-NIE
Inombolo yokhuseleko kwezentlalo, okanye ukuba imisebenzi yenziweyo ekhokelela ekubumbeni inkqubo yokhuseleko lwentlalo, inani lokuzibandakanya kwinkqubo yokhuseleko lwentlalo.
Ukongeza koku kungasentla, inkonzo isebenza kuphela ukuba iimfuno ezithile ziyafezekiswa, phakathi kwazo inkqubo yokusebenza ibonakala, enokuba yiWindows, iLinux kunye neMac, kwiinguqulelo zabo zamva nje, izikhangeli zewebhu ezinje ngeMicrosoft Edge, Google Chrome, IFirefox, kunye nomatshini oqinisekileyo weJava 6 okanye uhlobo oluphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ithini inombolo yam yokhuseleko lwentlalo kunye nendlela yokufumana ikopi
Banokubonisa ukuba inombolo ye-SS ifumaneka phi kwikhadi lezeMpilo, yeyona ilula ...